ပုံနှိပ်စက် | November 2019
အဆိုပါ HP ကပရင်တာ၏သငျ့လျြောသောသန့်ရှင်းရေး
ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်လွယ်ကူသောတဲ့အခါမှာပရင်တာဖုန်မှုန့်နှင့်အခြားအပျက်အစီး၏စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာငွေပမာဏကိုစုဆောင်း။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှဒီကိရိယာသို့မဟုတ်ပုံနှိပ်အရည်အသွေးဟာယိုယွင်းပျက်စီးလာ၏နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းသောစစ်ဆင်ရေးဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ ပင်ကြိုတင်ကာကွယ်အတိုင်းအတာအဖြစ်တစ်ခါတစ်ရံတွင်အနာဂတ်၌ပြဿနာများ၏ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်ကိုရှောင်ရှားခြင်းငှါ, ပစ္စည်းကိရိယာများအပြည့်အဝသန့်ရှင်းရေးဘို့အကြံပြုသည်။
အဆိုပါ HP ကပရင်တာဦးခေါင်းသန့်စင်
သငျသညျအစင်းပေါ်လာချောစာရွက်များပေါ်တွင်ပုံနှိပ်အရည်အသွေးကျဆင်းလာသတိပြုမိရန်စတင်နေလျှင်, အခြို့ element တွေကိုမမြင်နိုင်များမှာတစ်ခုသို့မဟုတ်အရောင်မဟုတ်ပါဘူးက printhead စင်ကြယ်စေ၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းထွက်သယ်ဆောင်ရန်အကြံပြုသည်။ Next ကိုကျနော်တို့ကဒီ HP ကပရင်တာ၏ပိုင်ရှင်များလုပ်ဖို့ဘယ်လိုအသေးစိတ်အတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ HP ကပရင်တာ printheads ရှင်းလင်းဆိုမှင်ဂျက် devices များ၏အရေးအပါဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ပရင်တာကိုကွန်ပျူတာထဲကနေတဲ့စာရွက်စာတမ်း print ထုတ်လုပ်နည်း
ကွန်ပျူတာနည်းပညာ၏ပမာဏကိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းတိုးပွားလာနေသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, ကယုတ္တိဖြစ်ပါတယ်, များစွာသော features တွေနှင့်အတူသာအကျွမ်းတဝင်နေသော PC ကိုအသုံးပြုသူအရေအတွက်အတော်လေးမကြာခဏတစ်ဦးအသုံးဝင်သောနှင့်အရေးကြီးပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သောစာရွက်စာတမ်းပုံနှိပ်ဥပမာ, အဖွစျ။ ဒါဟာရိုးရှင်းတဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်ဖြစ်ပါသည် - ပရင်တာတစ်ခုကကွန်ပျူတာကနေစာရွက်စာတမ်းပုံနှိပ်စာရွက်စာတမ်းများ၏ပုံနှိပ်ခြင်းကြောင့်ထင်ရပေသည်။
ကို Canon ပရင်တာစသည့်အရာတစ်ခုကိုထည့်သွင်း
ပရင်တာအတွက်အချိန်ကုန်မှင်တစ်အချို့ငွေပမာဏကုန်ခမ်းပြီးနောက်အဲဒါကိုအစားထိုးအချိန်ဖြစ်ပါသည်။ အများစုမှာသည့်အရာတစ်ခု, Canon ၏ထုတ်ကုန် Fine format နဲ့ဖြစ်ကြပြီးအကြောင်းကိုတဦးတည်းနှင့်အတူတူပင်နိယာမတပ်ဆင်ထားသည်။ Next ကိုကျနော်တို့အထက်ရဲ့ပုံနှိပ်ခြင်း device အတွက်အသစ်တခုမှင်အကြံပေးအဖွဲ့ install ဖို့ဘယ်လိုခြေလှမ်းတို့ကခြေလှမ်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။
ဘယ်လို HP ကပရင်တာပေါ်တွင်ပုံနှိပ်တန်းစီရှင်းလင်းဖို့
တနေ့ခြင်းတွင်ပုံနှိပ်စာရွက်စာတမ်းများ၏အသံအတိုးအကျယ်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ကြီးမားသောကွောငျ့ရုံးများအဘို့, ပရင်တာ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်အားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိပါသည်။ သို့သျောလညျးကိုတောင်ပရင်တာပုံနှိပ်ခြင်းအဘို့အအမြဲတမ်းတန်းစီအာမခံထားသည့်တော်တော်များများကွန်ပျူတာများ, ချိတ်ဆက်ထားပြီးနိုင်ပါသည်။ သို့သော်လည်းအဘယ်သို့ထိုကဲ့သို့သောစာရင်းလျှင် clean up လုပ်ဖို့အရေးပေါ်လိုအပ်နေ?
HP ကပရင်တာ print ထုတ်မပါဘူးဆိုရင်ဘယ်အရာကို
ပရင်တာနှင့်အတူပြဿနာများ - ကအရေးတကြီးကတော့အမှတ်ပေးအလုပ်လွန်သွားဖို့လိုအပ်သူကိုရုံးလုပ်သားများသို့မဟုတ်ကျောင်းသားများ, များအတွက်အမှန်တကယ်ထိတ်လန့်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်သမျှချွတ်ယွင်းမှု၏စာရင်းကသူတို့အားလုံးကိုဖုံးလွှမ်းရန်မဖြစ်နိုင်ကြောင်းဒါကြောင့်ကျယ်ပြန့်သည်။ ဒီအပြင်သူတို့ကလုံးဝနည်းပညာအသစ်မိတ်ဆက်ပေးမလိုပေမယ့်အရာ, ကွဲပြားခြားနားသောထုတ်လုပ်သူများ၏အရေအတွက်၏ခိုင်ခံ့သောကြီးထွားမှု, ကြောင့်, ဒါပေမယ့်မတူညီတဲ့ "အံ့သြဖွယ်များ" ကိုပေးအပ်သည်။
ဘယ်လို HP ကပရင်တာအတွက်ကျည်တောင့်ထည့်သွင်းရန်
အများဆုံး HP ကပရင်တာမှမှင်သည့်အရာတစ်ခုဖြုတ်ဖြစ်ကြပြီးပင်သီးခြားစီရောင်းချခဲ့သည်။ ပုံနှိပ်ကိရိယာများနီးပါးတိုင်းပိုင်ရှင်သင်ကစသည့်အရာတစ်ခုထည့်သွင်းချင်တဲ့အခြေအနေကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရသည်။ အတွေ့အကြုံသည်အသုံးပြုသူများအတွက်မကြာခဏဤလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ပတ်သက်သောမေးခွန်းများကိုရှိသည်။ ဒီနေ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် ပတ်သက်. သလောက်အသေးစိတ်ပြောပြရန်ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျလျင်မြန်စွာကျောင်းကလေးမြားအတှကျအလုပျသို့မဟုတ်စာစီစာကုံးများအတွက်အစီရင်ခံစာထွက် print ထုတ်နိုင်သကဲ့သို့? သာပရင်တာအဆက်မပြတ် access ကိုရှိခြင်းအားဖြင့်။ သူကအိမ်မှာမရုံးထဲမှာတည်သည်မှန်လျှင်, လူအပေါင်းတို့၏အကောင်းဆုံး။ ဒါပေမယ့်စက်ကိရိယာကိုရွေးချယ်ဖို့နဲ့နောင်တမရပါသလဲဘယ်လို သငျသညျထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းအားလုံးအမျိုးပေါင်းထဲမှာအသေးစိတ်နားလည်ရန်နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအရာတစျခုကောက်ချက်ချဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ကို Canon ပရင်တာကျည်တောင့်ဖြည့်ဖို့ကိုဘယ်လို
ပရင်တာအသုံးပြုခြင်း - ကကုန်ကျစရိတ် fixed ပါတယ်။ စက္ကူ, ဆေးသုတ် - ရလဒ်ရဖို့မဟုတ်သောဒြပ်စင်များဖြစ်ကြသည်။ ပထမဦးဆုံးအရင်းအမြစ်အလုံအလောက်ရိုးရှင်းသောဖြစ်တယ်, လူတစ်ဦးက၎င်း၏ဝယ်ယူအပေါ်ကြီးမားပိုက်ဆံဖြုန်းဖို့ရှိသည်, ဒီမှာဒုတိယင်ပါဘူးလျှင်, အမှုအရာအနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားပါသည်။ ကို Canon ပရင်တာကျည်တောင့်ဖြည့်ဖို့ကိုဘယ်လိုတစ်ဦးမှင်ဂျက်ပရင်တာများအတွက်ဒီကျည်တောင့်ကုန်ကျစရိတ်ကဖြည့်ဖို့ဘယ်လိုသိရန်လိုအပ်ကြောင်းမှဦးဆောင်လျက်ရှိသည်။
တစ်ဦးကို Canon ပရင်တာကိုသုံးပါဖို့ကိုဘယ်လို
အခုတော့ပိုပြီးအသုံးပြုသူများကအိမ်မှာအသုံးပြုမှုအတွက်ပရင်တာနှင့် MFPs ဝယ်ယူရန်။ ထိုထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက်စေ့စပ်အကြီးဆုံးကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာကို Canon မှစဉ်းစားသည်။ သူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်အသုံးပြုမှု, ယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်ကျယ်ပြန့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုလွယ်ကူခွဲဝေနေကြသည်။ ဒီနေ့ရဲ့ဆောင်းပါးထဲမှာသင်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သော device ကိုထုတ်လုပ်သူကနေအလုပ်၏အခြေခံစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါပုံနှိပ်စာရွက်စာတမ်းတဖြည်းဖြည်းဒစ်ဂျစ်တယ်ရှိသော counterpart ဖြင့်အစားထိုးခဲ့သည်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့နေဆဲအများအပြားအရေးကြီးသောစာရွက်စာတမ်းများသို့မဟုတ်ဓါတ်ပုံစက္ကူပေါ်တွင်သိုလှောင်ထားသည့်အချက်ကိုအားဖြင့်သက်ဆိုင်ရာဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုကဒီကော? ဟုတ်ပါတယ်, စကင်ဖတ်စစ်ဆေးနှင့်သင့်ကွန်ပျူတာမှသိမ်းဆည်းပါ။ ကွန်ပျူတာစာရွက်စာတမ်းများကိုစကင်လူအတော်များများ scan မတတျနိုငျဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ပြုလုပ်သည့်အချိန်တွင်မဆိုဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်ဘို့လိုအပ်ကြောင်း။
ကွန်ပျူတာကို Canon LBP2900 ချိတ်ဆက်ရန်ကဘယ်လို
အလုပ်သို့မဟုတ်ကျောင်းမှာလူအတော်များများဟာပုံနှိပ်ခြင်းစာရွက်စာတမ်းများမှစဉ်ဆက်မပြတ်ဝင်ရောက်ခွင့်လိုအပ်သည်။ ဒါဟာအဖြစ်သေးငယ်တဲ့စာသားကိုဖိုင်များနှင့်အတော်လေးအခွားအလုပျဖွစျနိုငျသညျ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီရည်ရွယ်ချက်များအတွက်စျေးကြီးပရင်တာ, လုံလောက်သောဘတ်ဂျက်မော်ဒယ်ကို Canon LBP2900 မလိုအပ်ပါဘူး။ ပရင်တာကိုသုံးပါရန်လွယ်ကူကွန်ပျူတာကို Canon LBP2900 ချိတ်ဆက်ခြင်း - ဤအသုံးပြုသူပေါ်မှာ install လုပ်ကြိုးစားကြဖို့ရှိသည်မည်မဟုတ်ကြောင်းအာမမခံနိုင်ပါဘူး။
အိမ်မှာအသုံးပြုမှုကိုပရင်တာကာလအတွင်းကွာခဏပြေး, ဒါပေမယ့်တစ်ခါတစ်ရံအချို့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအလုပ်လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သောဖြစ်လာသည်။ ဒါဟာသန့်ရှင်းရေးသည့်အရာတစ်ခုပါဝင်သည်။ ဒါဟာသို့သော်သူမ၏မျက်နှာနှင့်အတူကြောင့်ဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးရန်လိုအပ်သည်ရှိရာအမှတ်တစ်နှစ်အနည်းငယ်ယူပုံနှိပ် devices များအားလုံးနီးပါးပိုင်ရှင်တွေလိမ့်မည်။
အဆိုပါပရင်တာကအချို့သောကိုင်တွယ်ဖျော်ဖြေခြင်းဖြင့်ထည့်သွင်းခဲ့သည်တဲ့အခါမှသာ device ကိုစာရင်းထဲတွင်ပြသပါလိမ့်မည်။ အသုံးပြုသူများသည်ကိုယ်တိုင်အပေါငျးတို့သလုပ်ရပ်များလုပ်ဆောင်ရန်ရှိသည်ဒါကြောင့်အစဉ်အမြဲ, မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်ကိရိယာများကအသိအမှတ်ပြုမထားပေ။ ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်တော်ပရင်တာစာရင်းထဲတွင်လည်ပတ်မှုပုံနှိပ် device ကိုထည့်သွင်းဖို့နည်းလမ်းအနည်းငယ်မှာကြည့်ရှုမည်။
ကပုံနှိပ်သည့်အခါအရည်အသွေးမြင့်စာရွက်စာတမ်းများရယူတဖန်ဖြည့်သင့်တယ်ဒါမှပုံနှိပ်ပါသည့်အရာတစ်ခုအတွက်ပန်းချီအခါအားလျော်စွာ, အဆုံးသတ်ထားသည်။ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကသစ်တစ်ခုသည့်အရာတစ်ခုတစ်ခုသို့မဟုတ်အဆာပုံနှိပ်အရည်အသွေးမြင့်ကို install ပြီးနောက်အပြန်အလှန်ဆိုးရွားသွားစေသည်တွေ့ကြုံတတ်၏။ ဖြေရှင်းချက်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်နည်းလမ်းရှိပါတယ်တစ်ခုချင်းစီ၏ဤပြဿနာအများအပြားအကြောင်းတရားများရှိပါသည်။
က Add ပရင်တာ Wizard ကို၏အဖွင့်နှင့်အတူပြဿနာများကိုဖြေရှင်း
ပရင်တာ Wizard ကိုသငျသညျကို manually သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်သစ်တစ်ခုပရင်တာတပ်ဆင်ရန်ကို Windows အတွက် built-in features တွေသုံးပြီးပေးနိုင်ပါတယ်ထည့်ပါ။ ကတက်တဲ့ချိန်မှာသို့သော်တစ်ခါတစ်ရံ, အချို့အမှားအယွင်းများ inoperable tool ကိုညွှန်ပြ, ရှိပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောပြဿနာများအတွက်အကြောင်းပြချက်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ရှိပြီးတစ်ဦးချင်းစီ၏အများအပြားဖြစ်နိုင်သည်။
အဆိုပါ HP ကပရင်တာစကင်ဖတ်စစ်ဆေးလုပ်နည်း
Scanning စာရွက်စာတမ်းများတစ်ဦးလိုအပ်သောဇာတ်ကောင်များနှင့်အိမ်သူအိမ်သားအဖြစ်ဝတ်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ လိုအပ်မှုမှကျောင်းသင်ခန်းစာများများအတွက်သင်ကြားရေးပစ္စည်းများနှင့်အတူပမာဏမှာတူညီနိုင်ပါသည်, သို့သော်ဒုတိယကိစ္စ, ဥပမာ, မိသားစုစာရွက်စာတမ်းများ, ဓာတ်ပုံများနှင့်အရာရှိသမျှတို့ကိုပြုလုပ်မျိုး၏ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မဆိုင်ပါဘူးလိမ့်မည်။ ဤရွေ့ကား, များသောအားဖြင့်အိမ်မှာပြုနေသည်။
ပရင်တာ၏ IP ကို-လိပ်စာပြဌာန်းခွင့်
အခုတော့မသာကို USB connector ကိုတဆင့်, ကွန်ပျူတာချိတ်ဆက်ထားသောစကင်နာများနှင့် MFPs printers ။ သူတို့က LAN interface နဲ့ကြိုးမဲ့အင်တာနက်ကိုသုံးနိုင်သည်။ ဒြပ်ပေါင်းများပစ္စည်းကိရိယာများဤအမျိုးအစားများအတွက်အပြန်အလှန်မှန်ကန်သော operating system ကိုနှင့်အတူရာအရပ်ကိုကြာမထွက်ရ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ငြိမ်အိုင်ပီ-လိပ်စာ, တာဝန်ပေးအပ်ထားပါသည်။
အားလုံးနီးပါးပရင်တာ၏မော်ဒယ်များနှင့် MFPs ညီအစျကိုဖွင့်တပ်ဆင်ထားတဲ့ပုံနှိပ်စာမျက်နှာများနှင့်လုပ်ကွက်၏စံချိန်တင်၏စွပ်စွဲအဆုံးပြီးနောက်ဆေးသုတ်၏စီးဆင်းမှုကိုစောင့်ရှောက်စေတဲ့အထူး built-in ယန္တရားနှင့်အတူ။ အသုံးပြုသူများဆိုးဆေးတွေ့ရှိရသေး, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးကိုအစားထိုးတောင်းခံတဲ့အသိပေးစာလည်းမရှိသည့်အတွက်စိန်ခေါ်မှု, ရင်ဆိုင်ရသည်ကျည်တောင့်ဖြည့်ပါလိမ့်မည်။
ကို Canon MG2440 ပရင်တာပေါ်နှီးကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း
Jetted မှင်အတော်များများပုံနှိပ်၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်စက္ကူပေါ်မှာမကျပါဘူး။ အဆိုပါရလဒ်သည်ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက်ရည်ရွယ်ပါသည်ကွန်တိန်နာထဲမှာမှင်တစ်ခုစုဆောင်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။ Canon ၏ MG2440 ပရင်တာစံချိန်တင်စုဆောင်းခြင်းနှီးစောင့်ရှောက်, ထိုသို့ပြည့်ဝသည့်အခါ, တစ်ဦးအကြောင်းကြားစာဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
https://termotools.com my.termotools.com © ပုံနှိပ်စက် 2019